Gmail for iOS mahazo ny vaovao lehibe mpampiasa nefa tsy sambatra - News Fitsipika
Gmail for iOS mahazo ny vaovao lehibe mpampiasa nefa tsy sambatra
INTERNET GOAVAM-BE Google dia namoaka vaovao lehibe noho ny Gmail fampiharana ny iOS izay mitondra farany fototra Refresh ny mailaka mpanjifa, fa ny mpampiasa dia tsy faly momba izany.
Google nanambara ny vaovao tamin'ny Alarobia, manambara fa Gmail ho an'ny iPhone sy ny iPad izao mirehareha ny fototra Refresh endri-javatra, izay midika hoe mailaka ho “pre-haka” ary vonona ny hijery rehefa hanokatra ny fampiharana.
Google rindrambaiko injeniera Melissa hoy Dominguez tao amin'ny lahatsoratra bilaogy omaly, “Na mijery ianao ny mailaka zavatra voalohany amin'ny maraina na rehefa milahatra ianao ao amin'ny mpivarotra, te-hahazo ny hafatra araka izay haingana araka izay azo atao. Miaraka amin'izao fotoana izao ny fanavaozam-baovao ho amin'ny Gmail iOS App, dia mora kokoa ny hanao izany.”
Endri-javatra vaovao io dia mitaky iOS 7, ary ireo mpampiasa ihany koa mila manana “lafika App Refresh” mifamadika tamin'ny. Na izany aza, ny sasany mety tsy te-manelingelina, toy ny mpampiasa ny fampiharana ny fanavaozana no maika mba hitsapa alahelo azy eo amin'ny App Store, ny sasany milaza fa ny hanisy ratsy ny bateria fiainana.
Iray tsy sambatra mpampiasa Gmail nanao hoe:, “Anisan'ny fototra ity fanavaozam-baovao rindrambaiko mamelombelona ary namono ny bateria fiainana tena haingana. Ary ny sisa amin'ny fampiharana mbola tsara, fa tsy maintsy hiverina eny ny fototra Refresh noho ny bateria ny amiko.”
Ny Gmail for iOS fanavaozam-baovao izany ihany koa ny mitondra fanohanana ho an'ny sonia in manerana maro Gmail fampiharana iOS sy ny tolotra.
“Ny Gmail fampiharana manohana ihany koa ny ankehitriny sonia-in manerana an'i Google iOS fampiharana, anisan'izany ny Maps, Drive, Youtube sy Chrome,” Google nanazava. “Midira in ny iray, ary ianao ho nanao sonia in rehetra (izany ihany koa ny miasa ho an'ny sonia avy). Noho izany dia tsy maintsy ho mitendry amin'izany 27-toetra amam-panahy tenimiafina na retrieve ny 2-dingana fehezan-dalàna fanamarinana isaky ny hafa ianao hamakivaky Google fampiharana.”
Na izany aza, mpampiasa dia tsy faly loatra momba izany na, ary ny sasany milaza fa ny endri-javatra tsy miasa.
“Koa satria aho fanavaozana ny fampiharana izany tsy miditra ahy tao ary izany votsa be noho ny teo aloha ny fanavaozana,” miffed mpampiasa iray nanoratra.
Ity lahatsoratra ity, Gmail for iOS mahazo ny vaovao lehibe mpampiasa nefa tsy sambatra, ny mpilaza vaovao avy amin'ny The manontany ary nandefa eto nahazoana alalana.
21017	0 App Store, Gmail, Google, nanontany, IOS, iPad, iPhone, YouTube
← 10 Mahomby Natural fikarohana onitra Fa Heart Aretina 'Tsy misy fiovana’ in Schumacher toe-javatra →